Dhamma School Songs Safe APK Download by PRO-X Software Solution - dubAPK
By PRO-X Software Solution
PRO-X Software Solution Dhamma School Songs
ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း ၏ တေးသီးများ နှင့် တေးကဗျာများ ကို စုစည်းထားပါသည်။ ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း သည် ကလေးငယ်များကို လိမ္မာ ယဉ်ကျေးသော သားသား၊ မီးမီးလေး များဖြစ်လာအောင် သင်ကြားပြသပေးသည့် အပြင် ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအမွေအနှစ်များကို ပါ အတန်းအဆင့်အလိုက် ထည့်သွင်း၍ သင်ကြားပေးသော နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြားပြသရာတွင်လည်း CCA ဟုလူသိများသော ကလေးဗဟိုပြု ကာ သင်ကြားသော စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ကလေးငယ်များသည် ယဉ်ကျေးလိမ္မာလာသည့်အပြင် အတွေးအခေါ် အယူအဆများလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့် အလှူဒါန ပြုလုပ်ကာ ကုသိုလ် ရယူနိုင်ပါသည်။
" ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှဖို့ ဓမ္မအမွေဖြန့်ဝေစို့ "
ဓမ္မစကူးလ်အဓိဌာန် (၃) ချက်
၁။ ကျွနုပ်တို့သည် ဓမ္မဖြင့် ဘဝကိုတည်ဆောက်ပါမည်။
၂။ ကျွနုပ်တို့သည် အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ပါမည်။
၃။ ကျွနုပ်တို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့် နိုင်ငံတော်အကျိုးကို သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ပါမည်။
A collection of songs and poems of the Dhamma School Foundation. The Dhamma School Foundation provides care for children withawell-rounded personality In addition to teaching how to make fireworks, it is alsoaplace where the teachings of the Buddha are included in each class. Because the teaching is child-centered, also known as CCA, children will develop cultural skills and ideas. The Dhamma School Foundation is working to develop the area, so you can donate and get good deeds.
"Let us spread the Dhamma heritage to haveawise heart"
Dhamma School Adjectives 3
1. We will build our lives with the Dhamma.
2. We will carry the common good.
3. We will carry the interests of Buddhism and the Kingdom.
From version Dhamma School Songs 2.0.2:
− Improved user experience
− Bug fixes
− Updated logo
− Added google ads
Dhamma School Songs - version 2.0.2
Uploaded:September 18, 2021
App that can read Dhammapada in Myanmar English Patti language
MTL Learn Burmese Words
Learn to speak Burmese today
M S D T Company Limited မှ ဖန်တီးထားသော Dhamma Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Dhamma Thitsar mobile app is religious application for Myanmar.
Newly translation of Holy Quran in Myanmar language by Alin U Yin editorial team